Laptop, Notebook, Netbook ,Tablet PC ဆိုတာဘာလည် ဘယ်လိုခွဲခြားပြီးတော့ ခေါ်တာလဲ ~ ITmanHOME
08:29 နည်းပညာ No comments
Laptop, Notebook, Netbook ,Tablet PC ဆိုတာဘာလည် ဘယ်လိုခွဲခြားပြီးတော့ ခေါ်တာလဲ
Tablet PC ဆိုတဲ့အတိုင်း .. စားပွဲတင်ခုံ တစ်ကိုယ်ရေသုံး ကွန်ပျူတာလို့ အမည်ပေးထားပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အဓိက အားသာချက်ကတော့ .. (Monitor) Screen ကို ခေါက်ပြီးတော့ .. စာအုပ်တစ် အုပ်အသွင် .. မှတ်စုများကို (Monitor Screen) ပေါ်တွင် .. Electronic Pen ဖြင့်ေ၇းသားနိုင်ပါတ ယ်။ ဆိုလိုတာက .. Screen တစ်ခုလုံးကို.. တစ်ပတ်လှည်နိုင်လောက်တဲ့ အထိ လှည့်နိုင်ပြီး .. ခေါက်ချလိုက်နိုင်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့အပိုင်းကတော့ (notebook တို့ .. Laptop) တို့နဲ့ Functions တွေ နီးပါးလောက် တူညီမှု ရှိပါတယ်။ ဈေးနှုန်းအရကတော့ .. အပေါ်မှာ ပြောထားတဲ့ Notebook ထက် ဈေးပိုမိုကြီးမားပါတယ်။
အဲဒီလောက်ပါပဲ .. ။ ဒါပေမယ့်.. Portable Computer လို့ ပြောတော့မယ်ဆိုရင် (Pocket PC) လို့ ခေါ်ကြတဲ့ PDA တွေ၊ OS ပါရှိတဲ့ .. Mobile phone တွေက အစ ပါရှိလာပါတယ်။ ဒီခေတ်ထဲမှာတော့ .. နည်းပညာတွေ တစ်ဖြေးဖြေးနဲ့ .. သေးသည်ထက် သေးအောင် ဖန်တီး လာကြပါတယ်။